Kismaayo News » Kismaayo oo foolanaysa
Kismaayo oo foolanaysa
Kn: Boqolaal dad ah oo u badan siyaasiyiin, waxgarad, aqoonyahano iyo odayaasha dhaqanka ayaa kusoo qulqulaya magaalada Kismaayo xili bishan23-deeda lagu wado in uu furmo shirka maamul u samaynta Jubbooyinka.
Hoteelada muhiimka ah ee magaalada ayaa amaankooda siwey loo adkeeyey halkaasi oo ay degeen inta badan dadka shirka u yimid, iyada oo mid ka mid ah hoteelada oo lagu magacaabo Hotel Kismaayo aadan xitaa heleynin kursi aad ku fariisato oo aad shaah ku cabto.
Waxaa socda shirar ay beelaha leeyihiin, iyada oo gudiga qabanqaabada shirka uu saacado badan u fadhiyo shirar iyo hawlo xiriir u badan.
Goobta uu shirka ka furmayo oo ah dhismihii jaamacada Kismaayo ee deegaanka Ma Dhamaato halkaasi oo xitaa laga masaxay astaantii jaamacada ayaa amaankeeda siweyn loo adkeeyey, waxaa la sheegey in la geeyey in ka badan 700 oo firaash, iyadoo maalmahan lagu mashquulsanaa diyaarinta cuntada iyo cabitaanka ergada.
Jadwalka shirka waxaa la ogaan doonaa 21-da bisha, xiligaasi oo la filayo in gudiga qabanqaabada ay daabici doonaan, lana wadaagi doonaan ergada oo haatan xulisteeda meel gabogabo ah mareyso.
Xagga qofka qabanaya xilka ugu sareeya waxaad moodaa in uu jiro wax heshiis lagu yahay, waloow aysan jirin meel lagaga wada hadlay, kaasi oo ah in uusan jirin wax olole ah shirka ka hor, islamarkaasina ololaha lagu koobo madasha shirka si loo illaaliyo amaanka iyo kala dambeynta.
Waxaa muuqata saansaanta in dowlada federaalka aysan kasoo qeybgali doonin shirka, maadaamaa aysan jirin wax xiriir toos ah oo labada dhinac ka dhaxeeya, balse waxaa markasta furan wadahadal shirka kadib dhacaya kaasi oo ah hawsha ugu horeysa ee madaxweynaha Jubbaland loo doorto uu samaynayo.
Ergada waxa lagu qeybsanayaa degmooyin, degmo kasta waxaa ergada qeybsanaya beelaha degen, waxaa kale oo shirka kaalin muhiim ah ku leh odayaasha dhaqanka iyo waliba maamulada degmooyinka, xitaa degmooyinka aanan gacanta ku heynin maamulada usii magacaaban.
Kormeerayaal caalami ah ayaa lagu wadaa in ay shirka kasoo qeybgalaan, kuwaasi oo hubin doona habsami u socodka shirka.